10 Andro faritany haleha izy In Bavaria Alemaina | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Andro faritany haleha izy In Bavaria Alemaina
Raha vao nanomboka ny diany mikasa amin'ny alalan'ny Bavaria any Alemaina, ianao dia mety mieritreritra ny faritany haleha izy. Azo inoana fa ianao no tena tototry ny isan'ny mahagaga, noho ireo porofo toerana mba hitsidika. Plus, tianao antonona azy rehetra ao anaty 10 andro faritany haleha in Bavaria.
Bavaria manana be dia be ny tolotra, ary izany dia ho an'ny sasany. Afaka mitsidika maro ny tanàna mahafinaritra tao Bavaria, toy ny Munich, ohatra. Azonao atao ihany koa mandeha eo amin'ny lehibe Bavarian labiera lalana raha toa ianao ka connoisseur ny labiera.
Dia homenay anao amin'ny antsipiriany ho an'ny faritany haleha izy Bavaria, ary ianareo rehetra dia mila atao dia ny manaraka izany, ary manao zavatra tena fotoana! Noho izany, dia aoka isika hijery.
Rail Transport tontolo iainana no tena Friendly Way To Travel. Thny lahatsoratra voasoratra mba hampianatra momba Train Travel ny Save A Train, Train mora indrindra Tickets Website In The World.
Inona no tokony ho fantatsika Alohan'ny hanomboka Miaraka Our 10 Faritany haleha izy Day In Bavaria?
Alohan'ny manomboka, misy zavatra vitsivitsy ilainao ho fantatra.
Bavaria dia faritany lehibe, ary afaka mora foana ao mandany herinandro. Tsy ilaina angamba raha te-hahita ny zava-drehetra eo amin'ny tsipiriany lehibe.
Na izany aza, raha mandeha ho 10 andro diany, Avy eo dia tsy maintsy manapaka ny zavatra sasany avy. Inona no more, dia ho tsara indrindra ny handeha amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby. Raha toa ianao ka hanao izany, dia ho tratry ny ananany ny toerana rehetra amin'ny fotoana tsy. Ankoatra izany, dia hanana ny fahafahana ho vavolombelona lehibe indrindra hevitra Bavaria tolotra.
koa, mandeha lamasinina ny alalan 'Bavaria dia tena mora sy lafo. Tickets no mora vidy, ary afaka mitsidika isan-joron'ny ny faritany.
Amin'ny farany, tokony ho fantatrao, rehefa hitsidika Bavaria. Ny fotoana ny 10 lala andehana in Bavaria andro dia tokony hanarona dia na aiza na aiza avy Septambra ka hatramin'ny Oktobra. Ho tsy ny vahoaka, ary koa ny fahafahana hahazo fitsidihana Oktoberfest.
Ary izay rehetra izany dia miafina, aoka isika hojerentsika ny faritany haleha izy:
Bavaria faritany haleha izy Day 1 ary 2: Munich
Rehefa ho any Bavaria, tsy maintsy manomboka amin'ny Munich. Voalohany indrindra, dia mora ny hanatratra, na aiza na aiza ianao any Eoropa. Ianao dia afaka maka fiaran-dalamby avy na aiza na aiza, ary efa ho tonga Munich. na, raha avy any lavitra, dia afaka manidina. Munich no tanàna lehibe indrindra ao amin'ny Bavaria, ary fiaramanidina manidina ho azy avy amin'ny tanàna maro manerana izao tontolo izao. Raha tsy izany, dia afaka tonga mora foana izany manidina tanàna lehibe hafa ary avy eo ho any Munich.
Plus, dia aoka isika tsy hanadino fa misy 10 lala andehana in Bavaria andro tsy ho tanteraka raha tsy Munich. Ho Azo antoka fa hahita ity tanàna ity mahagaga toerana ny fitsidihana. Famantaranandro Avy amin'ny mahavariana tilikambo izy ny Englisher Garten, dia manana toerana maro ny fitsidihana.
Raha te-hahita betsaka izany araka izay azo atao, dia manoro hevitra anao mba hijanona eo afovoany. toy izany, dia ho tratry ny ananany ny zava-drehetra an-tongotra.
Tamin'ny faran'ny andro 2, ianao dia tokony entana ny kitapo ary mankanesa any amin'ny tanànan'i Berchtesgaden.
3 ary 4: Berchtesgaden sy ny manodidina National Park
Berchtesgaden Faritany Atsimo Atsinanana ny Bavaria. Izany dia kely paosy ny tany amin'ny sisin-tanin'i Aotrisy. Ho hitanao ny tsara indrindra valan-javaboary tany Alemaina ao amin'io faritra io. Plus, dia ihany koa ny hahazo ny hipetraka vetivety any amin'ny tanàna mahagaga ny Berchtesgaden.
Amin'ny farany, ianao dia tsy maintsy hamangy Lake Konigsee sy ny voromahery Akanim. Lake Konigsee no ambony indrindra farihy tany Alemaina, ary dia voahodidina tendrombohitra kanto dia kanto. Ary ny amin'ny Eagles Akanim, fantatr'ireo olona tia tantara rehetra ho tia hitsidika azy, toy ny tamin'ny lahatsoratra ny baiko ny Nazia.
Raha te-afangaro zavatra ny, dia afaka ihany koa ny mandeha any Salzburg. Ny tanàna akaikin'ny sisin-tany sy ny Berchtesgaden, ary izany no koa mahagaga ny Salzburg!
Afaka ny mahagaga dia andro farany amin'ny sakafo in Berchtesgaden. Rehefa avy nandany ny alina, dia afaka mifindra amin'ny ho any amin'ny toerana amin'ny andro manaraka 5.
Salzburg ny Berchtesgaden
Bavaria faritany haleha izy Days 5, 6, ary 7: Garmisch Partenkirchen, Zugspitze, Ary Neuschwanstein Castle
Ny dingana manaraka eo amin'ny 10 lala andehana in Bavaria andro dia ahitana ny sasany amin'ireo indrindra toerana tsara tarehy tany Alemaina. Indray mandeha isan'andro 5 manomboka, ianao dia tokony mitsambikina eo amin'ny fiaran-dalamby ho any Garmisch Partenkirchen.
Ity ny zavatra afaka mahatsapa ao amin'ity faritra ity:
Day 5: Hanorim-ponenana ao ary mitsidika ny ampahany lehibe indrindra ao an-tanàna.
Day 6: Mandehana any amin'ny mahagaga Neuschwanstein Castle. Fantatrao izany ho iray amin'ireo lapa malaza indrindra eto an-tany. Izany dia azo itokiana Fairytale lapa sy ny izay aingam-panahy ny Disney lapa.
Day 7: Tsidiho ny tampon'i Zugspitze, izay somary akaiky ny tanàna. Eto dia afaka mahazo iray amin'ireo fomba fijery tsara indrindra ny Alpes. Ny olona sasany tongotra, fa manoro hevitra anao mba handray ny telegrama fiara.
Izany no ho lava indrindra ampahany ny dianareo ary manan-danja iray ny baotin'i. Ary tamin'ny andro 8, ianao dia afaka mifindra hatrany Rothenburg.
Ulm ny Fussen Lamasinina
Munich ny Fussen Lamasinina
Stuttgart ho Fussen Lamasinina
Nuremberg ho Fussen Lamasinina
8: Rothenburg faritany haleha izy In Bavaria
Day 8 dia voatokana ho ela mitaingina fiaran-dalamby ary ny tanàna mareva-doko ny Rothenburg Ob der Tauber. Tsy mila miahiahy fa ny mitaingina mahari, ianao dia hanana be dia be ny fotoana hamangiana amin'io tanàna. Dia tena kely, ary afaka mahita azy ao indray tolakandro.
Tamin'ny faran'ny andro, dia afaka hisakafo ao amin'ny Schneeballen. Raha tianao, dia afaka mijanona ny alina, na dia afaka mifindra amin'ny ho any amin'ny toerana manaraka: Nuremberg na Wurzburg.
Berlin ny Rothenburg Ob der Tauber Lamasinina
Stuttgart ho Rothenburg Ob der Tauber Lamasinina
Munich ny Rothenburg Ob der Tauber Lamasinina
Frankfurt ny Rothenburg Ob der Tauber Lamasinina
Bavaria faritany haleha izy Days 9 ary 10: Nuremberg Or Wurzburg
Nuremberg no tanàna lehibe indrindra faharoa ao amin'ny faritanin'i Bavaria. Izany ihany koa dia tsy maintsy mitsidika toerana eo amin'ny 10 andro faritany haleha in Bavaria. Na izany aza, raha tianao, afaka mifamadika izy foana izany Wurzburg. Samy tanàna dia somary akaiky amin'izy samy izy sy Rothenburg, toy izany koa ny Travel anjara dia ho mora.
Samy tanàna dia mahagaga sy feno Medieval tantara sy ny lapa. Noho izany, dia tena miakatra ho any aminareo mba hanapa-kevitra izay iray ihany no mahaliana kokoa.
Rehefa anao dia tsy feno efa ho roa andro, mihitsy aza mety ho afaka hitsidika roa.
Noho izany, mbola ao. ny 10 andro faritany haleha in Bavaria, Alemaina. Nataonay azo antoka ny ahitana fijanonana manan-danja rehetra eto amin'ity faritra mahafinaritra any Eoropa. Efa tafiditra ihany koa ny fomba hahatratra azy rehetra lamasinina ho tena hiaina ny ody rehetra izany dia manana ny tolotra.
Raha te-hahafantatra bebe kokoa momba faritany haleha izy In Bavaria, dia aza misalasala adiresy Save A Train.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “A 10 Faritany haleha izy Day In Bavaria Alemaina” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fitinerary-bavaria-germany%2F Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)